Martin Odegaard ayaa albaabada u furay inuu sii joogo Arsenal waqti dheer Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Martin Odegaard ayaa albaabada u furay inuu sii joogo Arsenal waqti dheer
Martin Odegaard ayaa albaabada u furay inuu sii joogo Arsenal waqti dheer
Martin Odegaard ayaa albaabka u furay inuu si rasmi ah ugu biiro Arsenal inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Ka dib markii uu ku guuldareystay inuu saameyn joogta ah ku yeesho Real Madrid qeybtii hore ee ololaha, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa loo ogolaaday inuu heshiis amaah ah ugu saxiixo Gunners inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
22 jirkaan ayaa ku soo bilowday kulankiisii ​​ugu horeysay ee Arsenal galabnimadii Axada, isagoo ka soo muuqday kulankii ay 4-2 kaga badiyeen Leeds United ee Premier League.
Isagoo hadlayay ciyaarta ka dib, ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Norway wuxuu qirey inuu u furan yahay dhamaan fursadaha dambe 2021.
Odegaard ayaa u sheegay TV2 : “Marna ma ogaan kartid waxa dhici doona, laakiin haatan, waxaan kaliya diirada saarayaa inaan sameeyo waxqabadkeyga ugu fiican xilli ciyaareedkan iyo inaan caawiyo kooxda sida ugu macquulsan.”
Kubadsameeyaha ayaa qandaraaskiisa Bernabeu waxaa uga harsan labo sano iyo badh.
Previous articleMaxaa ka cusub heshiiskii Ramos iyo Real madrid.
Next articleSafka barcelona ay kaga hortageyso BSG oo la shaaciyey.
Wararka Ciyaaraha Maanta1920